Creative Writing » အီကိုကျကျ ဒီဇိုင်းအလှ (Part 1)	22
လုံမလေးမွန်မွန် says: Me Me Me!!!
Now thinking to send all my clothes back to hometown and just to buy some office dresses. How??? I feel dislike Myanmar dress these days. :D
may july says: ဟွာ လေ နာလဲ အရေ ရော အဖတ်ရော မတင်တာ ကြာဘီ လို့ ..
မမချွိ says: အရည်လည်မှ အဖတ်တွေ့မှာမို့ အရင် အရည်လည်ပါစေအူးးး
Ma Ei says: .သူများက ဆယ်တန်းလောက်မှာ အမေချုပ်ပေးတာကို ဂျီးများလွန်းလို့ ကွကိုယ်ချုပ်တဲ့ ဆိုထဲက ကိုယ့်အင်္ကျီကိုယ့်အကြိုက်ချုပ်ဝတ်ခဲ့တာ မဂ္ပဇင်း ဂျာနယ် ကက်တလောက်အစုံဖွ ဟိုနဲ့ ဒီနဲ့ပေါင်း ပုံမျိုးစုံဆွဲ ဒီဇိုင်းနာတို့ ဘာတို့လဲမသိခဲ့ပါဘူး …
.ပြောရရင် မင်ဂါဆောင်တာတောင် ကိုယ့်အင်္ကျီကိုယ်ချုပ်ဝတ်ခဲ့တာ အဲ့လို….. .အလုပ်ဝင်တော့လဲ ကိုယ်ဝတ်တာတွေကြိုက်လို့ MD ကအစ ချုပ်ပေးပါ ပူဆာကြတာနဲ့ ရုံးပြန် ရုံးပိတ်ရက်တွေ စက်ချုပ်ဖြစ်ရော အဲ့အပိုဝင်ငွေနဲ့ ရွှေလုပ်လို့ရခဲ့တဲ့ထိ….
မမချွိ says: အင်မတန် ပါသော ဝါသနာပါ မွအိရယ်။
hmee says: ဂျိုကုတ်ရှိရာ ဂျိုကုတ်လာ။ တူရာတူရာ စုတယ်ဆိုတာ တယ်မှန်တာပဲ။ အလှကြိုက်တယ် အခုထိလည်း လှအောင်နေတယ်။ အရွယ်တူတွေ မိန်းမကြီးကြီးတွေ မြင်ရင် ကိုယ် အဲ့လို မဖြစ်စေရဘူးဘို့ အမြဲတွေးတယ်။ ယောက်ကျားပြစ်မှာ စိုးလို့လားတဲ့ ပြောကြတယ် ဘယ်လောက်လှလှ ခြံခုန်ချင်သူက ခုန်မှာပဲ။ ယောက်ကျားအတွက်မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဖာသာ စမတ်ကျကျနေချင်တာ။ အ၀တ်အစားဆို ဘယ်လောက် သဘောကျကျ ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေရင် ကိုယ်ါကိုယ် အချိုး မကျစေဘူးဆို မ၀တ်ဘူး။ ဘယ်ဟာနဲ့ တွဲဝတ်ရင် လိုက်မလဲ စကပ်နဲ့လား ဘောင်းဘီဆို အတိုနဲ့လား အရှည် နဲ့လား ၀တ်ကြည့် မှန်ရှေ့မှာကြည့် လိုက်ဖက်တယ် ထင်မှ ၀တ်တယ် ( ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ လိုက်ဖက်တာ သူများ မျက်စိနဲ့တော့ မသိဘူး) ဖိနပ်လည်း အဲ့လိုပဲ။ စတိုင်ပင်နဲ့ လိုက်တဲ့ ဖိနပ်။ စကပ်တိုနဲ့လိုက်တာ ဂျင်းပင်နဲ့လိုက်တာ ( စကားစပ်တုန်း on the knee ၀တ်ပြီး ညှပ်ဖိနပ်စီးသူများ အားကြီးအမြင်ကပ်တယ်) ဈေးနှုန်းလည်းမများ အပေါစားဆို သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်လို့ အပေါစားမဟုတ်တဲ့ ကိုယ့် ဘတ်ဂျက်နဲ့ ကိုက်တာ စုံအောင် ၀ယ်ထားတယ်။ လှချင်တာ အဲ့လို။ ဗမာ အင်္ကျီ သူများချုပ်ပေးတာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် လုံးဝ မဖြစ်လို့။ တခါတခါ ကိုယ် ၀တ်ချင်တဲ့ ပုံစံက လက်ဝင်တော့ ဈေး အများကြီးပေးရတော့ တတ်နိုင်ဘူး ဒါနဲ့ သင်ပလိုက်တယ်။ လှချင် ၀ါသနာလည်း အားကြီးပါတော့ ကိုယ်ချုပ်တာ ၀တ်ပြီးရင် တခြားသူ ချုပ်ပေးတာ အချိုးမကျကြတော့ဘူး။ ကြွားတာ။ မွေးသမိခင် ဆို ကိုယ် မရှိတုန်း အပ်ထည်တွေ စိတ်တိုင်းမကျလို့ ကိုယ် အပြင်ထွက်ခါနီး ၃နှစ်စာ ချုပ်ခိုင်းတယ် ပြန်လာမှ အသစ်ချုပ်မယ်တဲ့ ညီမတော်တွေ ဒီဇိုင်းပြောစရာ မလိုလို့ ကိုယ်ပဲ။ ကိုယ့် အကျီလည်း အားကြီး အဆန်းထွင်တယ်။ ဟီး ပြောရင်း ဇီ့ ပို့စ်ထက် ရှည်တော့မယ် ဆောတီး :P :P
မမချွိ says: ဒီ ကောမန့်လည်း စိမ်းချင်တယ်။
မြစပဲရိုး says: ကွန်ဖော့ဇုံထဲ က ဖောက်ထွက်ဖို့ အလှမပြင်ဘဲ နေကြည့်ပါလေ။ :D Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: ကွန်ဖော့ဇုံ ထဲက ဖောက်ထွက်ဖို့ ကနေ့ ရုံးကို ရှူးစီးလာတာ
မမချွိ says: စကားမာမာပြောချင်ရင် လှအောင်နေ ဆိုလို့ လည်း လှအောင်နေရတယ်။
A mar nyo says: အ၀တ်အစားနဲ့ပတ်သက်ရင် အစ်မတွေဆင်တာဝတ်တယ်။ အကျီ င်္ ချုပ်ရင်မမကြီးသွားပေးလိုက်တယ် ချုပ်
မမချွိ says: မြင်ဖူးရင် ပြောပြမယ်။
A mar nyo says: မြင်ဘူးပါတယ် Gazette ဆုပေးပွဲတုန်းကတစ်ခါလေ မှီ(မမကြီး)နဲ့မီးလာတယ်လေ မမချွိ အဲ့တုန်းကမမချွိစကပ်လေးနဲ့လေ
မမချွိ says: အာ။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: အ၀တ်အစားအသုံးအဆောင်ဝယ်ဖို့အားကြီးပျင်းတာပဲ..မရှိမဖြစ်လိုမှဝယ်ဖြစ်တယ်
.မိန်းကလေးနဲ့တော့ဘယ်တူပါ့မလဲနော့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: ခုချိန်ထိတော့ စိတ်ကူးရတဲ့နေ့ တဆင်စာအပြည့်ဖက်ရှင်ကျကျဝတ်ဖြစ်ပေမဲ့ စိတ်ကူးမရတဲ့နေ့ကတော့တွေ့ရာဆွဲဝတ်သွားလိုကိတာပဲ
မမချွိ says: အဲဒီ စိတ်ကူးမရတဲ့နေ့ အတွက် ရှပ်အဖြူနဲ့ ဂျင်း နဲ့ စဉ်ထားရာ က မဒါဝတ် ဖစ်တော့တာပဲ။
Wow says: ကိုယ်ကပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေတတ်လို့လား စမင်ကတ်လို့ အလွတ်ဖဲ့တာလားတော့မသိ အရင်ရုံးတုံးက Management သင်တန်းပေးတဲ့ သီရိလက်ာ က တျောက်က ကိုယ့်တဲ့တဲ့ကျိပြီး Don’t use your beauty in businesd. တဲ့၊ စာသင်သလိုနဲ့ အပီဖဲ့တာ
မမချွိ says: သီရီလင်္ကာက ဟာမ တွေက မလှဘူးလေ။
Thint Aye Yeik says: ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ဖက်ရှင်ကို ရွေး ဆင်တတ်တယ်ဆိုတာကိုက နည်းတဲ့ ပါရမီမဟုတ်
မမချွိ says: နာ တို့ ငယ်တုန်းကလည်း ရှိတာဝတ်ပါပဲအေရယ်။